Jinan Lide Rubber & Plastiki Co Ltd.
rukoko rwechivakwa nerukoko
waya yekusimbisa, kumucheto curl
hydrostatic kumanikidza bvunzo 1.5 nguva
wehunyambiri machine centre
kuchinjika kwemajubhu ekuwedzera erabha pamwe neshoni dzakabatana
lateral uye axial kufamba bvunzo
Yega Arch Rubber Kuwedzera Joint
Kaviri Arch Rubber Kuwedzera Joint
Rabha Pipe Chinongedzo
ELASTOMER NYAMA NEMITAMBO YEMAHARA KUFANANISA
Yakajairwa Flange Dimensions
Kuisa uye Kuongorora Kuraira
"Attestation de conformité sanitaire" (ACS) France mvumo yakawanikwa muna Sep.29,2021
Pano panouya chitupa chedu che ACS, chiri cheFrance inonwa mvura marabha majoini. Uye isu takaita bvunzo iyi kubva Nyamavhuvhu 20,2020. Uye isu takawana chitupa musi wa Sep, 29, 2021.
Gumiguru 13-14 mutengi wechiFrench anoshanyira memo
Isu tiri kufara kwazvo kambani yavo iri kutenga vanhu vakauya kufekitori yedu muna Gumiguru 13-14, uye vakave nemvumo yakanaka yekambani yedu. Uku ndiko kushanya kwavo kwechipiri. Kambani yedu ndiyo fekitori yemapfundo erabha, isu tine mbiri bhora uye imwechete bhora rabha majoini. Uye zvinhu zverabha zviri NB ...
Rubha Zvivakwa uye Ruvara Kudzora
Rubha inosanganisira maviri mapoka: chaiwo rabha uye chakaita zvokugadzirwa rabha.Natural rabha chakagadzirwa namatidza kubva rabha miti uye rabha uswa, uye chakaita zvokugadzirwa rabha inowanikwa ne siyana monomers.Rubber zvigadzirwa anoshandiswa nevakawanda muzvinhu zvose maindasitiri kana upenyu. Miti yekutanga yerabha yakakura muSouth America ...
Isu takagadzira tekinoroji nyowani yerabha yekubatana - yerabha mubatanidzwa isina maburi ekubuda
Dambudziko rekubuda mukugadzirwa kwekubatanidzwa kwerabha kwagara kuri chinhu chakakosha chevulcanization maitiro. Panguva imwecheteyo, maburi ekuburitsa muzvigadzirwa zvakapedzwa anokanganisa kutaridzika kwezvigadzirwa, uye vashandi vanofanirwa kutsemura mafuru nemaoko mu ...
"Attestation de conformité sanitaire" (ACS) France mvumo yakatangwa munaAug, 2020.
Iyo "Attestation de conformité sanitaire" (ACS) chiFrench mvura yekunwa chitupa iyo inoratidza kukodzera kwezvigadzirwa zvinosangana nemvura inonyorerwa kudyiwa nevanhu. MunaAug, 2020, zvichibva pane zvinodiwa nemutengi, isu takaronga ...
Uyu Chikumi, edu EPDM marara majoini akapasa bvunzo dzeSingapore SETSCO.
Nzira Yekuedza: SS 375- Kukodzera kwezvinhu zvisiri zvesimbi zvekushandisa mukusangana nemvura inoitirwa kudyiwa nevanhu maererano nemhedzisiro yavo pahunhu hwemvura. 1) Chikamu 1: Rondedzero 2) Chikamu 2: Masampuli ekuyedza 3) Chikamu 2: 2: 1: Od ...
On Chikunguru.2,2019, isu takawana CE chitupa.
On Chikunguru.2,2019, isu takawana CE chitupa. Izvo zvinhu zvinokosheswa zvinowedzerana kuwedzera kuwedzerwa kwevhiniga yerabha yakabatana, zvinhu EPDM pasi peiyo yakatarwa EN681-1 1996. Rondedzera Nha .: HST-JNLR2119062045 Zvivakwa zvakadzama ndezviinotevera: Imwe chete arch flange mhando yakasimudzwa kumeso / kumeso kumeso ...
PaJune 14th we2019, isu tine zvitupa zveWras.
Mvura yekunwa yakakosha zvakanyanya kuhutano hwevanhu. Kusvibiswa kwemvura ndicho chinhu chikuru chinokanganisa muviri wevanhu. Kuvandudza kunaka kwemvura yekunwa kwakakosha uye kumusoro kwakakosha. Kazhinji, matanho ekuvandudza mvura yekunwa ndeaya anotevera: Kudzivirirwa ...
Iwe unogona kutibata nesu kune zvako zvese zvikumbiro uye mazano.
Titumire email, tifonere kana kuzadza pazasi Bvunzurudzo pepa Tichadzokera kwauri mukati maawa makumi maviri nemana.